Xiisadda France iyo Turkey ee dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo ka dareysa | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xiisadda France iyo Turkey ee dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo ka dareysa
France ayaa ku eedeysay Turkey inay calooshood u shaqeystayaal Suuriyaan ah u dirtay si ay uga qeyb qaataan dagaalka gobolka Nagorno-Karabakh ee u dhaxeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia.
Turkey waa ay beenisay inay maleeshiyaad u dirtay dagaalka.
France, Russia iyo Mareykanka ayaa wada maamula Ururka Amniga iyo Wada-shaqeynta ee OSCE ama loo yaqaan Minsk Group, kaasi oo la aas-aasay 1992-kii si uu xal nabadeed ugu helo muranka ka taagan gobolka Nagorno-Karabakh.
“Madaxweyne Macron iyo madaxweyne Putin waxay isku raaceen baahida loo qabo dadaal wada-jir ah oo xabad joojin loogu gaaro,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay xafiiska Macron.
“Waxay sidoo kale wadaagaan walaaca ay ka qabaan calooshood u shaqeystayaal Suuriyaan ah oo Turkey ay gaysay gobolka Nagorno-Karabakh.”
Madaxtooyada Faransiiska ma aysan soo bandhigin wax caddeymo ah oo la xiriira eedeynta ka dhanka ah Turkiga. Sidoo kale Ruushka bayaan uu soo saaray kuma qeexin in Turkey ay dirtay maleeshiyaad.
Wasiirka arrimaha dibedda Turkey Mevlut Cavusoglu ayaa shalay isaga oo ka jawaabay hadal kale oo kasoo yeeray Macron wuxuu yiri “Haddii Macron uusan wax walaac ah ka qabin dhulka Azerbaijan, taageerada uu u muujiyey Armenia waxay la macno tahay inuu taageerayo qabsashada.”
Dagaalka Azerbaijan iyo Armenia oo billowday Axaddii ayaa waxaa illaa hadda ku dhintay in ka badan 100 qof.
Wadamada ku bohoobey Midowga Yurub ayaa markale Turkiga ugu hanjabey in ay Saari doonaan, cunaqabateyn adag, haddii aaney Xukuumadda Ankara Joojin sida ay hadalka u dhigeen gardarrada uu ku hayso qaybo kamid ah dhulka Giriiga.
Af hayeen u hadley Midowga ayaa hadalkani waxaa uu ka sheegey shir hoggaamiyaasha Yurub ay ku yeesheen xarunta Brussels iyaga oo qodobada madaxdaasina ay kawada xaajooneyeen, ay meelaha hore ugu jirtey khilaafka u dhexeeya Athanis iyo Ankara oo Jimca ah, laakiin hadalkan ka soo yeerey wadamadani kama aaney jawaabin Dowladda Turkiga.
Xukuumadda Ankara ayaan ilaa iyo hadda ka jawaabin hadalkan hanjabaadda ah ee ka soo yeeray Midowga Yurub .
Xiisadda France iyo Turkey ee dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo ka dareysa was last modified: October 3rd, 2020 by Admin